Nimoonaa Xilahuun Imaanaa | OromianEconomist
Oromia: Gootichi Sabboonaa Qabsa’aa Oromoo Obbo Dabalaa Xaafaa Roobii humnoota tikaa wayyaaneen ajjeefame December 6, 2015
Tags: Dabalaa Xaafaa Roobii, Engineer Tesfahum Chemeda, Gooticha Oromoo Obbo Dabalaa Xaafaa Roobii, Hidhaa fi Ajjeechaan Qabsoo Oromoo yo Finiinse Malee Duubatti hin Deebisu!, Nimoonaa Xilahuun Imaanaa
Oduu Gaddaa: Dabalaa Xaafaa wareegame; ‘Gaddi koo guddaa, eelaan koos cimaadha!’
(Oromedia, Finfinnee, 05 Mudde 2015) Waggoota jahaa oliif Maakkalaawi fi Qaalittiitti dararamaa kan ture Dabalaa Xaafaa humnoota tikaa wayyaaneen ajjeefame.
Oduun Finfinnee irraa nu geesse akka ibsitutti, Dabalaan gaafa Mudde 2 bara 2015 magaalaa Fichee keessaa humnoota tikaatin ukkaamfame.
Yeroo san irraa kaasee haga guyyaa lammataatti reeffi isaa magaalaa Caancotirra kiilo meetira tokko irratti argametti, achi buuteen isaa dhabamee ture.
Dhalataa Godina Shawaa Kaaba Aanaa Dagam Ganda leeman Caarakii mana murtii aanaa Dagam keessa hojjechaa kan ture Obboo Dabalaa Xaafaa Roobii, sababa Oromummaa isaatiin yakkamee woggaa 6 mana hidhaa Makalaawii fi Qallittii kessatti hiraarfamaa ture.
Ob Dabalaan hidhaa waggaa jahaa booda bara darbe mana hidhaati gadi lakkifamee akka ture odeessi nu gahe addeessee jira.
Dabalaa Xaafaa mana hidhaa Maaíkalaawwiitti akka bare kan nuuf ibse hiriyyaan isaa tokko, Dabalaan kutataa, jabaa fi falmataa haqaa taúu isa aragaa bahee jira.
“Guyyaa gaafa mana hidhaa maa’ikelaawwii kutaa dukkanaatti wal barree kaasnee Dabalaa Xaafaa waliin hiriyaa turre,”kan jedhe hiriyyaan isaa kun, Dabalaan Amajjii 1, bara 2007 waggaa saddeet dura sababa Oromummaa isaatiin bakka hojii isaa irraa akka butame nuuf ibseera.
“Bara sana wayitan kutaa dukkanni ija natti babaasu keessa taa’ee dhiphadhu, kutaa cina koo jiru keessaa namni tokko gidaara natti rukutee sagalee hasaasuutiin, “jabaadhu!” naan jedha, “kan jedhe hiriyaan isa akun, “maqaa fi eenyummaa keenya osoo hinbariin nama haala sanaan baatii sadiif turre, “jechuun jabina isaaf ragaa baheera.
“Booda namoota biroo 35 waliin lakkoofsa galmee yakkaa 54411 jalatti waamamaa himatamne,”kan jedh miiltoon Dabalaa kun, “guyyaa himatni nutti banamee kaasee waan hundaa waliin dabarsine; waliin yakkamtoota taanee nutti murteeffame; waliin dhugaa hammannee baddaa fi gammoojjii geeffamne balbala mana hidhaa lakkoofne, “jechuun gidiraan dhalli Oromoo Bilisummaa barbaadan argaa jiran tarreesse.
“Achittis walitti obsa halkanoota waan hin bariine hin fakkaanne, guyyoota waan jijjiiraman hinfakkaanne heddu dabarsine,” jechuunis kutannoo fi jabina ittiin hidhaa fi gidraa san keessa darban nu mil’achiise.
“Garuu edaa duuti dhihoo jirti,”kna jedhe miltoon Dabalaa kun, “kufaatiin goota kanaa nuti har’as taanaan jireenyaaf illee wabii kan hinqabne, duutis baay’ee nutti dhihoo jiraachuu mirkaneessa,”jechuun haala jiru addeesse.
“Goota summii jireenyaa waliin unachaa bara dabarfanne haala kanaan dhabuu caalaa wanti nama dhukkubsu hinjiru, ” jechuuni miiraa gadda keessa isaa jiru jechootaan ibse.
“Gaddi koo guddaa, eelaan koos cimaadha,” jedhe.
Sirni awwaalcha Dabalaa Xaafaas bakka firooti isaa fi hiriyooti isaa argaman magaalaa Fiicheetti kabajaan raawwateera.
Dargaggoo Dabalaa Xaafaa humnoota tikaatiin akka ajjeefame ibsame .
(OMN:Oduu Muddee 05,2015): Waggoota saddeettan drabaniif Oromummaa isaatiin yakkamee hidhamee, dararamaa kanturee fi dhiyeenya kana mana hidhaatii kan gadi lakkifame Dargaggoo Dabalaa xaafaa humnoota tikaatiin ajjeefamuu akka hinoolle maatiin isaa OMN tti himan.
Godina Salaalee aanaa Kuyyuu ganda qonnaan bulaa Qarree Ta’aa tti dhalatee, Maqaa gooticha Oromoo Agarii Tulluu lammaffaa jedhuun jiraattoota naannichaan kan yaamamaa ture, Dargaggoo Dabalaa Xaafaa,miidhaa sirniichi uummata Oromoo irraan gahaa jiru adda durummaan qabsaa’uun beekama.Maqaa kanas kan gonfate gootummaadhaan qabsoo kabajamuu mirga uummata isaatiif gochaa tureen akka ta’e seenaa isaa irraa beekuun danda’ameera.
Humnoota tikaa sirnichaan yeroo mara hordofamaa ture kan jedhan maatiin Dargaggoo Dabalaa Xaafaa ajjeechaan kun kan irratti raawwatame guyyaa sadii dura qararqara magaalaa Caancoottii jedhan.
Humnoota tikaa mootummaa Itoophiyaatiin kan ajjeefame Dabalaa Xaafaa qofa miti.Obbolessi isaa Baqqalaa Xaafaa kan jedhamu barnoota isaa kutaa kudha lammaffaa xumuree gara qe’eetti deebi’ee odoo abbaa isaa Obbo Xaafaa Mullataa gargaaraa jiru humnoota tikaa mootummaatiin waggaa sadii dura butamee erga fuudhamee booda hanga har’aatti achi buuteensaa hinbeekamne.Maatiinsaa akka jedhanitti akka `Obboleessa isaa illee reefa isaa karatti waan isaaniif hindarbineef haatisaa lubbuun jirtu karaa ilaalaa hafte jedhan.Abbaansaa obbo Xaafaa Muldhataa ijoolleesaa korommii isaanii lamaan kana sababa Oromummaan isaaniitiin waan ofcinaa dhabaniif aarii saniin odoo gubatanii lubbuun isaani dabre jechuun firoottan Dabalaa kan OMN tti himan.
Dargaggoo Dabalaa Xaafaatti Oromummaa isaatiin yakkamee hidhaa waggaa 12tu itti murtaa’ee ture.Haata’uti garuu hidhaa waggaa sadeetii akka xumureen gadi lakkifame.Oggaa mana hidhaati bahu garuu Abbaasaa fi Obboleessa isaa ijaan arguuf carraa hin arganne.Abbaansaa kan du’an wayita inni mana hidhaa keessa jiru waan ta’eef.
Ajjeechaan wayita ammaa Dabalaa irratti raawwatame kunis mormii barattoonni oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiran bakka Dabalaan lubbuun jirutti Salaaleetti yoo dhalate dubbicha daran ni hammeessa waan ta’eef dhabamsisuu filatanii jechuun akka isa dursan wahillan isaa dubbataa jiran. Dabalaan gootota Salaalee warra akka Taaddasaa Birruu, Asaffaa Shaaroo Lammii, Badhaadha Dilgaasaa, Dhuferaa Deettii, Badhoo Dachaasaa waliin maqaa Agarii Tulluu lammaaffaa jedhu gonfateen seenaa keessatti bara baraan maqaansaa yaadatama.
Sirni Awwaalcha gooticha Oromoo Dargaggoo Dabalaa Xaafaa bakka dhaloota isaa Salaalee ,aanaa kuyyuu ,ganda qotee bulaa Qarree ta’aatti har’a raawwatameera.
Dabalaan fuudhee bultii dhaabbachuuf carraa hinarganne.Haata’uutii garuu abbaa micayyoo drbaa takka ta’uun beekameera.
Dargaggoo Dabalaa Xaafaa odoo mirga saba isaaf qabsaa’uu wareegameef OMN’n gadda itti dhagahame ibsaa maatii isaa hafaniif jajjabina hawwa.
Oduu kana ilaallatu OMN irraa gara dhumatti caqasaa:-